युवाहरुले जान्नैपर्ने सवाल– अधिकार र अराजकता एउटै होइन - Sisne Online
आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा छौ । यो गणतन्त्र ल्याउन २००७ सालदेखि हालसम्म हजारौं हजारको बलिदान भएको छ । आज हामी जुन ठाउँमा छौं, त्यो व्यवस्था कसैले दया मायामा दिएको होइन । हजारौं नेपाली जनताका महानतम छोराछोरीको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । आज ती महान सहिद तथा घाइते योद्धाहरुलाइ सहृदय सम्मान गर्दछु ।
आज हामीले बोल्न पाएका छौं र बोलिरहेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता छ र आफूलाइ लागेको कुरा जो अरु कसैलाइ असर नपर्ने गरी बोल्न र लेख्न पाइछ । यो नै लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो । आज बोल्न पायो भन्दैमा जसलाई जे मनलाग्यो त्यही र कपोकल्पित कुरा बोल्दै गर्दा हामी कहाँ पुग्दै छौ सबैले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
आज हामी देख्दै छौं, विभिन्न भेषमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध जे भएको छ, त्यो कदापि सहैय छैन र हुदैन । आज आफूलाइ लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने केही दलका नेताले सस्तो लोकप्रियतामा जे बोलिरहेका छन्, त्यो हामीलाई कदापि मान्य छैन ।
लोकतन्त्र भनेको बिधिको शासन, अनुशासन र संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर बोल्न र लेख्न पाउने हो नकि अराजक, उछृङ्खल, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही र नागरिकको अधिकार हनन् हुने गरी बोल्ने ? कोहीलाइ अन्याय परे अदालत छ र अन्य कानूनी निकाय छन्, कोहीले भ्रष्टाचार गरे कानुनअनुसार कार्वाही गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा आपनो बिधिअनुसार अगाडि पढने ठाउँ हुँदाहुँदै आज किन मान्छेही प्रतिगामी तत्वको उक्साहटमा चोक चोकमा बर्बराउदै हिडेका छन ? यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय कुन हो र किन चुप लागेर बससेका छन ?
आज जनताले पाएको अधिकारका विरुद्ध जे भैरहेको छ र हुँदै छ, त्यो नेपाली जनतालाई कदापि मान्य छैन । सचेत सबै युवाहरूले सोच्ने बेला आएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि यसका विरुद्ध जसरी यथास्थितिबादी शक्ति सल्बलाएका छन र चिहानमा पुगेको व्यवस्थालाई फर्काउने कोसिस गर्दैछन, यसलाई समयमै उपचार गर्ने तपाई हाम्रो जिम्मेवार हो ।
म सबै सचेत जनतालाई भन्न चाहान्छु– अब फेरि हामी जनताका अधिकार विरुद्ध लाग्नेलाई ठेगान लगाउनैपर्छ । ठूलो बलिदानबाट आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरिपेक्षेता, समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्वलगायत जनताका मौलिक अधिकारहरु जे प्राप्त भएका छन, ती तपाई हामीले उपभोग गर्ने बेला फेरि यी जनअधिकारका विरुद्ध लाग्ने यथास्थिति शक्तिलाई परास्त गर्न एकजुट होऔ ।
आज गाउँ गाउँमा आफै जनताले चुनेका जन प्रतिनिधिले जनताको घरदैलोमा अधिकार पुर्यायका छन । सबै जनताले हरेक दिनको गतिविधि, काम कार्य आफै हेर्न, देख्न,र उपभोग गर्न पाएका छन । हिजो यी अधिकार सिहदरवारमा केन्द्रित गर्ने शक्तिलाई यी जनअधिकार पचेको छैन ।
आज सबै जातजाति, धर्म ,लिङ्ग, वर्ण, उत्पीडित क्षेत्र सबै शासनसत्तामा पुग्दा मुठीभर केही गणतन्त्र र संघीयता बिरोधी शक्तिलाई यो व्यवस्था नपचेको सत्य हो तर आज नेपाली जनतालाई राम्रो भएको छ र हुन्छ।
नयाँ व्यवस्थामा काम गर्दै जादा कुनै ठाउँमा केही गल्ती कमजोरी हुन सक्छ त्यो सबैले सच्याउने हिम्मत गर्नैपर्छ र गर्छौ । तर, तिललाई पहाड बनाएर जनताको अधिकारका विरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन र दिने छैनौ ।
आज जनताको छोराछोरी कुनै पनि जातजाति ,धर्म, लिङ्ग वर्ग र क्षेत्रको व्यक्ति देशको राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्छ र पुग्ने अधिकार यो व्यवस्थामा छ । कसैले बसक्सिस दिनुपर्दैन, आफै जनताबाट चुनियर त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ र पुगेको छ ।
हिजो कुनै अमूर्त जातको, त्यसमा पनि छोरो हुनैपर्ने, त्यति मात्र होइन जेठो छोरो हुनैपर्ने, अन्य छोराछोरी लाई भेदभाव भएको व्यवस्था थियो । आज जनताको छोराछोरी त्यो ठाउँमा पुग्ने अधिकार प्राप्त भएको व्यवस्था नै गणतन्त्र हो ।
त्यसैले यति समुन्नत ब्यवस्थापन राम्रो कि कुनै उच्च जातको मात्र पुग्ने व्यवस्था राम्रो त्यो कुरा छुटयाउने जिम्मा तपाई हामीको हो ।
बलिदान, त्याग र संघर्षले हामीलाई आज यो ठाउँमा पुर्याएको छ । ठूलो संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट सबैले आआफ्नो ठाउँबाट गरौ ।
काम गर्दा केही भएका कमि कमजोरी लाई सच्चाउदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बानाउले अभियानमा अविचलित रुपमा लाग्नै पर्छ । संविधानमा प्राप्त भएका जनताका अधिकारलाई तपाई हामी सबैले प्रयोग गरौ र देश निर्माणको महा अभियानमा लागौ ।